पक्राउ परेको २४ घण्टा नबित्दै फेरियो कल्पनाको बयान, गोंगबु ह’त्याप्रकरणमा अरु पनि संग्लग्न भएको खुलासा — Sanchar Kendra
पक्राउ परेको २४ घण्टा नबित्दै फेरियो कल्पनाको बयान, गोंगबु ह’त्याप्रकरणमा अरु पनि संग्लग्न भएको खुलासा
काठमाडाैं । केटोलाई आमाले नपुगेर लुकिछिपी छोरी ताक्ने, आमाचाहिँ ट्याक्सी चढेर डुलिरहने ! ५० लाखको हिसाब पनि छोरीसँगको सम्बन्धका नाममा तिर्न नखोज्ने भएपछि मान्छे का’टेर फ्याँक्ने ! टोखा– १०, गोंगबुस्थित नवज्योति मार्गको विभ’त्स ह’त्या का’ण्डको मूल कारण हो यो । जनआस्थामा समाचार छ ।
आइतबार (साउन २५) बिहान नवज्योति मार्गमै दाङका कृष्णबहादुर बोहोराको श’वको ९० प्रतिशत भाग सुटकेशमा पेला परेको थियो भने टाउको र खुट्टाचाहिँ ३ सय मीटर पूर्वाेउत्तरस्थित स्वर्गद्वारी मार्गको खाली ठाउँमा भेटियो । अघिल्लो रात कृष्णबहादुरलाई आफ्नै डेरामा काटकुट पारी झोलामा पोको पार्ने महिला कल्पना मुडभरी (पौडेल) र उनकी १६ वर्षिया छोरी भने त्यही दिन एउटा एम्बुलेन्स चढेर चितवनतिर भागे ।
पछिल्ला दिनमा पैसा र छोरीको कुरालाई लिएर कृष्णबहादुरसँग झगडा पर्ने गरेको बयान कल्पनाले प्रहरीलाई दिएकी छन् । सोमबार पक्राउ पर्नासाथ कृष्णबहादुरले छोरीलाई बला’त्कार गर्न खोजेका कारण ह’त्या गरेको बताएकी उनले मंगलबारदेखि बयान फेरेकी छन् । उनको पहिलो बयान घटनासँग बाझ्नेखालको थियो ।
यसपछि कल्पनासँग नियमित शारीरिक सम्पर्कमा रहेका कृष्णबहादुरले छोरीतिर पनि मन डुलाउन खोजेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आमा धेरैजसो बाहिरबाहिरै हुने, कृष्णबहादुर चाहिँ काम सकेपछि गोंगबुतिरै हुने । कोठामा हेर्थे, आमा–छोरीमध्ये जो भए पनि पुगिहाल्थे । छोरीमाथि गलत नियतले सम्बन्ध राख्न खोजेपछि उनी प्रतिवाद गर्थिन् । राति आमा आएपछि छोरीले सुनाउने गरेकी थिइन् ।
यसपछि कल्पनाले पैसा नतिर्ने, बरु बलात्कार मुद्दा हाल्ने भन्दै आएकी थिइन् । प्रहरीले कृष्णबहादुर र कल्पनाबीच लेनदेनसम्बन्धी कागजात पनि बरामद गरेको छ । कृष्णबहादुर हत्या अभियोगमा अहिलेसम्म कल्पना, उनकी छोरी र एम्बुलेन्सका ड्राइभर मात्र पक्राउ परेका छन् ।
तर, यसमा संलग्न अरू व्यक्ति पनि हुनुपर्ने प्रहरीको अनुमान छ । आमा–छोरीमात्रै भएर मान्छे मार्ने, झोलामा प्याक गर्ने र खुला ठाउँमा लगेर फ्याँक्नेजस्ता काम सम्पन्न भएकोमा प्रहरीको शंका छ । पक्राउ परेका एम्बुलेन्स ड्राइभरले कल्पनासँगको सम्बन्ध स्विकारेका छन् । तर, घटनामा संलग्नताबारे स्विकारेका छैनन् ।
उपकुलपतिले अश्लील बोलेको भन्दै मप विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुखले दिए सामूहिक राजीनामा